Okokugqibela-Isixhobo sokugcina sinolwazi ngeNtengiso yezeNtlalo! | Martech Zone
Abantu abangakholekiyo kwi-Social Media Examiner baqalise ubulungu babo bobulungu,
Umbutho weNtengiso yezeNtlalontle. Injongo yoMbutho kukukunceda ufumane izimvo ezintsha, uthintele ukulingwa kunye nephutha, ukumilisela ezona ndlela zintsha zentlalo kunye nokufumana eyona nto isebenza kakuhle kwintengiso yemidiya.
Xa ujoyina uMbutho, uyakufumana iiseshoni zoqeqesho zoqobo ezintathu ngenyanga nganye efike ngexesha, enobuchule kunye nekhokelwa yingcali. Oku kuthetha ukuba uya kuba noqeqesho oluqhubekayo oluyimfuneko ekuphumezeni zonke iindlela zangoku zokuthengisa kwimithombo yeendaba ezichaphazelekayo. Kwaye uya kuba nakho ukunxibelelana nabanye abathengisi njengawe.
Akusekho mfuneko yokuba uzibuze ukuba oontanga bakho bajongana njani nale mizabalazo uyiyo. Nombutho, unganxibelelana ngokulula nabanye abathengisi, wabelane ngamava kwaye nixhasane.
Nantsi indawo epholileyo. Yonke into yenzeka kwi-Intanethi! Umbutho wadalelwa ukuba ube lula kwaye ufikeleleke kubathengisi abaxakekileyo njengawe. Ungazimasa iiseshoni zoqeqesho kwaye unxibelelane nabanye abathengisi ukusuka kwintuthuzelo yesihlalo sakho seofisi – nokuba uphi na ehlabathini! Yiya apha ukuze ufunde ngakumbi.
Iqela elikwiSocial Media Examiner lisebenze iinyanga ezilishumi elinanye lisenzela indawo abantu abanjengawe- abathengisi abaxakekileyo kunye nabanini bamashishini abafuna ukusebenzisa ezona ndlela zintsha zentlalontle ngaphandle kokulinga.
Bafundile ngaphezulu kwe-4,500 yabathengisi ukuze baqonde ngenene imiceli mngeni ohlukileyo ojamelana nayo. Nantsi into abayifumeneyo:
Uxakeke ngokwenene kwaye unqwenela ukuba ube nexesha elininzi lokuqhubeka kunye nehlabathi eliguqukayo lokuthengisa kwimithombo yeendaba.
Ufuna indlela elula yokufumana amaqhinga entlalontle azisa iziphumo zokwenyani.
Ufuna ukuphelisa ulingo kunye nempazamo kwaye ujonge kwezona zinto zisebenzayo, ngaphandle kwawo wonke uqikelelo kunye nokulinga.
Ukhangele inzuzo yokukhuphisana.
Ufuna ukugxila kwinto esebenzayo.
Abahlohli bakho baya kuba ziincutshe kwicala eliphambili leendaba ezentlalo; iingcali kuFacebook, kuTwitter, kwiLinkedIn nangaphaya. UMhloli weMidiya yezeNtlalontle unokufikelela kwibhentshi enzulu yeengcali zeshishini eziza kukuzisela ezona ndlela zamva nje, ezifanelekileyo kwezentlalo zokukunceda uhlale kwicala eliphambili.
Joyina i-1000 + yabarhwebi oFumana kunye nabo kwaye uphendulwe imibuzo yakho yeendaba zosasazo!
Ukubhengezwa: Singabahlobo beqela labavavanyi bezeNtlalontle kwaye sisebenzisa amakhonkco obulungu ukukhuthaza iminyhadala kunye nezibonelelo zabo.
tags: Iqela lentengisoubulungu bezentengisointengiso yoluntuubulunguUMichael StelznerImithombo yeNtengiso yezeNtlalontle